Kitra – Fifanintsanana Can 2022: tsy tokony hisy olona ivelan’ny Barea miditra an-tsehatra | NewsMada
Mbola ambentin-dresaky ny olona hatrany aloha ny lalao nikatrohan’ny Barea de Madagascar, tamin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, ny talata 17 novambra lasa teo. Betsaka ny fanakianana, izay tokony handraisana fepetra hanatsaran-javatra.
Tsy nisy tsy nahazo fanakianana na mpilalao na mpanazatra na ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), taorian’ny lalao nifanandrinan’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, farany teo iny. Rariny loatra izany satria manomboka milentika izany ny fahaizana sy ny zava-bitan’ny Barea de Madagascar. Efa ela ny mpijery sy ny mpankafy no mangetaheta fandresena. Raha tsiahivina, herintaona lasa izay no niaina izany farany ny mpanohana.
Betsaka ny antony mahatonga izany ary samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay. Ny zavatra hita aloha, maro loatra ireo mijapy ny Barea sy ny baolina kitra malagasy. Mikorontana ny fandrindrana ankapobeny eo anivon’ny federasiona sy ny Barea. Mifanitsaka andraikitra ny tsirairay. Olona tsy ao anatin’ny tontolo mihitsy ary tsy mahalala akory ny antsipiriany amin’izay baolina kitra, nefa miseho etsy sy eroa. Vokany, misy fiantraikany betsaka any amin’ny lalaon’ny Barea ilay fisavoritahana madinidinika.
Tokony handraisana fepetra haingana izany. Tsy tokony hisy olona ivelan’ny Barea, miditra an-tsehatra na eny amin’ny fanazarantena na mandritra ny lalao ataony. Mila mianatra ny lalàna mifehy ny baolina kitra ihany koa ny daholobe, mba tsy hilatsahan’ny sazy. Ohatra amin’izany, olona voasoratra ao anaty taratasin-dalao ihany ny afaka mipetraka eny amin’ny “surface technique”. Iray ihany no mahazo mitsangana mandritra ny lalao, na ny mpanazatra na ny mpanampy azy.
Tsara fantarina ihany koa ny atao hoe : “Match à huis clos”. Lalao tsy azo atrehina ary tsy tokony hisy tabataba na fanentanana ao anaty kianja. Tsy voahajan’ny Malagasy anefa ireo rehetra ireo, noho ny fitiavana tafahoatra ny Barea de Madagascar. Mila mifampitaiza sy mifanoro ny rehetra mba tsy hisian’ny fihemorana indray.